The Best Human Interest Feature Award – Yangon Journalism School
The Best Human Interest Feature Award
7 Day News, Vol. 17, No. 28
အင်းစိန်မြို့နယ်သားများ၏ ရှားလော့ဟုမ်းဇာတ်လမ်းသည် မှောင်ရိပ်ခိုသူတစ်ဦးနှင့် ဆိုက်ကားတစ်စီးမှ စတင်ခဲ့လေသည်။
စက်တင်ဘာ ၇ ရက် မိုးစုံးစုံးချုပ်နေသည့် နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ် ရပ်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ရပ်ကွက်အတွင်း ကင်းလှည့်စစ်ဆေးနေသည်။
ခ (၁၁) လမ်း ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာအရောက်တွင် လူတစ်ဦးသည် ဆိုက်ကားတစ်စီးနောက်တွင် ကုန်းကုန်းကွကွ လုပ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကင်းလှည့်သူများက ‘‘ဘာလုပ်နေတာလဲ’’ ဟု မေးသောအခါ ကုန်းကွကွလုပ်နေသော အမျိုးသားက ‘‘ဆိုက်ကား နင်းနေတာလေဗျာ’’ ဟု ပြန်ဖြေလေသည်။
ကင်းလှည့်နေသူနှစ်ဦးသည် မသင်္ကာစရာအခြေအနေဟု ယူဆခဲ့သည်။ အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်း ဆိုက်ကားလိုင်စင်သည် အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဆိုက်ကားလိုင်စင်သည် အပြာရောင်ဖြစ်နေ၏။ ကင်းလှည့်သူများက အခြေပြုအဖွဲ့ထဲမှ လူအချို့ကို ချက်ချင်းပြန်ခေါ်ပြီး မှောင်ရိပ်ခိုနေသူကို ဖမ်းဆီးတော့သည်။
‘‘အမည် ဝေယံထွန်း၊ အသား ညိုညို၊ ဒေါင်ကောင်းကောင်း၊ အသက် (၂၈) လို့ ပြောတယ်။ လေး၊ ငါးယောက် ဝိုင်းဖမ်းတာတောင် အင်မတန်သန်တယ်ဗျာ။ ရုန်းကန်နေတာ မနည်းထိန်းရတယ်’’ ဟု ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့ဝင် ရာအိမ်မှူး ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ဖမ်းဆီးလာသည့်လူ၏ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို ပြောပြသည်။
သို့ဖြင့် စစ်လားဆေးလားလုပ်ကြတော့ ဖမ်းမိလာသူက ဆိုက်ကားသူခိုး။ ကြို့ကုန်း ပန်းဈေးက သော့မခတ်ထားသော ဆိုက်ကားတစ်စီးကို နင်း၍ယူလာသည်ဟု ဆိုသည်။ အချိန်က နံနက် ၂ နာရီကျော်ဆိုတော့ အတော်လင့်နေပြီ။ လူကလည်း ဆိုက်ကားသူခိုးဆိုတော့ လောက်လောက်လားလားမဟုတ်ဟု ယူဆကာ ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့ ရုံးစိုက်သော အင်းစိန်မြို့နယ် (က+ခ) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာပင် သူခိုးကို လက်ထိတ်ခတ် ညသိပ်လိုက်တော့သည်။
‘‘ဒီကြားထဲ အင်းစိန်ကမ်းနားမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းလို့ဆိုပြီး အခြေပြုအဖွဲ့က သွားကူညီလိုက်သေးတယ်ဗျ။ ပြန်လာတော့ မိုးတွေမိပြီး လူတွေလည်း စိုရွှဲနေတာ။ သူခိုးကို လူသုံးယောက် စောင့်ရစ်ခဲ့၊ ကျန်တဲ့လူတွေက အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး သုံးဦးစောင့်ကျန်နေခဲ့တာ’’ ဟု ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ဆိုသည်။
နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် တပ်ကြပ်သစ်လွင် အပါအဝင် အခြေပြုအဖွဲ့မှ နှစ်ဦးစောင့်အိပ်ကြ၏။ သဘောကောင်းသူ တပ်ကြပ်သစ်လွင်က သူခိုးကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားရာမှ သက်သောင့်သက်သာ အိပ်ပါစေဟုဆိုကာ ပက်လက်အနေအထား စားပွဲခုံနှင့်တွဲ၍ လက်ထိတ်ခတ်ပြီး ခုံအောက်တွင် အိပ်စေသည်။ ထိုစားပွဲပေါ်၌ လူတစ်ဦး တက်အိပ်သည်။ ဘေးစားပွဲတွင် ရဲက အိပ်သည်။ သူခိုးဘေး၌ တစ်ဦးက စောင့်အိပ်သည်။
မိုးကလည်းသည်း၊ ညလည်းနက်ပြီဆိုတော့ သူတို့ တမေ့တမော အိပ်ပျော်သွားကြ၏။
မိုးလင်းတော့ စားပွဲခုံအောက်တွင် လက်ထိတ်တစ်ဖက်က တန်းလန်း၊ ဆိုက်ကားသူခိုးက ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားလေပြီ။ ဒါတင်မကသေး တပ်ကြပ်သစ်လွင်၏ ဟန်းဖုန်း၊ ဝေါ်ကီတော်ကီနှင့် ရပ်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့မှ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုပါ ဆိုက်ကားသူခိုးက မ,ပြီး လစ်သွားသည်။
ဘယ်လို ထွက်ပြေးသွားလဲ ရေရေရာရာမသိကြ။ ရဲတပ်ကြပ်သစ်လွင်၏ လက်ထိတ်သော့ကို အခြေပြုအဖွဲ့မှ လူတစ်ဦးက တရားခံအိပ်သည့် စားပွဲ၏အပေါ် တွင် တင်ထားမိသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါလက်ထိတ်သော့ကို သူခိုးက မည်သို့ယူူသွားသနည်း။ ခုံပေါ်က သော့ကို ခုံအောက်က ခြေထောက်နှင့် လှမ်းလျက်ယူသွားသလား၊ ကင်းမြီးကောက်ထောင် ယူသွားသလား စဉ်းစားခန်းဖွင့် မရကြ။
‘‘တပ်ကြပ်သစ်လွင်က မနက်ဆို စခန်းကိုတန်းပို့တော့မှာ။ အမှုထွက်ချက်တွေ၊ ဘာတွေ အကုန်ရေးပြီးနေပြီ။ အခုတော့ သူခိုးက အချုပ်ထဲမရောက်ဘဲ သူပဲ အချုပ်ထဲရောက်သွားရှာတယ်’’ ဟု ရာအိမ်မှူး ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ပြောသည်။
မှန်ပါသည်။ ရာဇဝတ်သားမှာ ဝေါ်ကီတော်ကီပါယူပြီး လစ်ပြေးသောကြောင့် တပ်ကြပ်သစ်လွင်ခမျာ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေဖြင့် နေ့ချင်းပင် အချုပ်ထဲ ရောက်သွားခဲ့သည်။
ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများမှာ နယ်ထိန်း တပ်ကြပ်သစ်လွင်အပေါ် သံယောဇဉ်ရှိသည်။ ချစ်ခင်ကြသည်။ တပ်ကြပ်သစ်လွင်သည် ရောဂါအခံရှိလျက် ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်နှင့်ပင် မိုးမရှောင်၊ လေမရှောင် မခိုမကပ် လုပ်တတ်သူ၊ အားကိုးရသော တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ အမှုအခင်းဆိုလျှင် မညည်းမညူ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သူဟု ရပ်ကွက်ကချီးမွမ်းသည်။ ယခု တရားခံဖမ်းရာမှ တရားခံပြန်ဖြစ်၍ စိတ်ထဲ မကောင်းကြ။
‘‘သစ်လွင်ကြီးက တကယ် အလုပ်လုပ်တာပါ။ သူရောက်လာပြီး သုံးလထဲမှာပဲ အမှုပေါင်း ၅၀ ကျော်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းပြီး ဖမ်းတာ။ ဆေးမှုတွေရော၊ ရမ်းကားမှုတွေရော အစုံပေါ့ဗျာ’’ ဟု (က+ခ) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်စိုးက ပြောသည်။
သို့ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ရပ်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့များ ခေါင်းချင်းဆိုင်၍ တိုင်ပင်ကြသည်။ ရဲတပ်ကြပ်သစ်လွင်အတွက် သက်သက်ညှာညှာဖြစ်ရေးနှင့် အခြေပြုအဖွဲ့မှ ခိုးသွားသော ဆိုင်ကယ်ကို ပြန်ရရေး၊ ထိုသူခိုးကို လက်ရဖမ်းရန် အဖွဲ့ဝင်များ အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြစ်နေသည်။ ထိုထဲတွင် ရဲမွမ်းမံသင်တန်း တက်နေရာမှ အင်းစိန်သို့ ခဏပြန်လာသော ဒုတပ်ကြပ် တင်ထွန်းအောင် လည်း ပါဝင်လေသည်။ တင်ထွန်းအောင်က တပ်ကြပ်သစ်လွင်၏ တပည့်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးခြေလှမ်းက အင်းစိန်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကားသူခိုးက ထွက်ပြေးသွားသည့်အပြင် ပစ္စည်းပါ ယူဆောင်သွားသေးသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အားဖြည့်ဖမ်းဆီးပေးရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့များကို ချိတ်ဆက်အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူခိုး၏ဓာတ်ပုံကို ရထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနှင့် ဖမ်းဆီးဖို့ ခက်ခဲမည်မဟုတ်ဟု အခြေပြုအဖွဲ့ဝင်များက ယူဆသည်။
သို့သော် အင်းစိန်မြို့နယ် နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင်၏ တုံ့ပြန်ချက်သည် အခြေပြုအဖွဲ့ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ‘‘သူတို့က တခြားကိစ္စတွေ ရှိတယ်။ မကူနိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ သူတို့အလုပ်မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ။ တရားခံမိရင်သာ စခန်းလာပို့လို့ ဆိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အခြေ ပြုအဖွဲ့အဆင့်ပဲရှိတာ။ ဖမ်းဖို့ဆီးဖို့ကျတော့ ရဲမပါဘဲ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ’’ ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်စိုးက ပြောသည်။
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တုံ့ပြန်မှုကို ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤသို့ဖြင့် အခြေပြုအဖွဲ့၏ ကိုယ်တိုင်တရားခံဖမ်းဆီးရေး အစီအစဉ် စတင်တော့သည်။ ကနဦးအနေဖြင့် သူခိုးယူဆောင်သွားသော တပ်ကြပ်သစ်လွင်၏ တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်ကြည့်သည်။ သူခိုးက ပိတ်တစ်ချက် ဖွင့်တစ်ချက်၊ ဖုန်းကိုင်တစ်ချက် မကိုင်တစ်ချက် ဖြစ်နေသည်။ စက်တင်ဘာ ၈ ရက် တစ်နေ့လုံး ဆက်သွယ်၍မရ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင်တော့ အခြေပြုအဖွဲ့က နောက် နည်းတစ်မျိုး စမ်းသပ်ကြည့်သည်။ ရဲလုပ်ငန်း နားလည်နေသော ဒုတပ်ကြပ်တင်ထွန်းအောင်၏ အကြံဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖုန်းဆက်ခိုင်းပြီး ဖုန်းပိုင်ရှင် ရဲတပ်ကြပ်သစ်လွင်ကို ပိုက်ဆံ ပေးစရာရှိလို့ပါဟု လှည့်ဖြားပြောဆိုစေခဲ့သည်။
‘‘အဲဒီနေ့က ဖုန်းစိမ်းနဲ့တန်းဆက်တော့ ဝင်သွားတယ်။ တပ်ကြပ်သစ်လွင်ရဲ့ ဖုန်းလားပေါ့။ ဦးသစ်လွင်ကို ပိုက်ဆံသုံးသိန်း အကြွေးပေးစရာရှိတာ အဲဒါလာပေးမလို့ပါလို့ပြောတော့ သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ပိုက်ဆံကို အခြေပြုအဖွဲ့က တစ်ယောက်က စိုက်ထုတ်ထားပေးတယ်။ ပထမက တစ်သိန်းသုံးမလို့။ တစ်သိန်းဆို နည်းတယ်၊ လောဘမဝင်ဘဲနေမယ်ဆိုပြီး သုံးသိန်းနဲ့မျှားလိုက်တာ’’ ဟု ဦးခင်စိုးကပြောသည်။
သို့နှင့် ဆိုက်ကားသူခိုးက ကြို့ကုန်းလမ်းဆုံတွင် အချိန်းအဆိုပြုလုပ်ပြီး ငွေသုံးသိန်းယူရန် သဘောတူခဲ့သည်။
အခြေပြုအဖွဲ့ဝင်များသည် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က အားကိုးမရသောကြောင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရင်းနှီးသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တရားခံအား ချိန်းဆိုပြီးဖြစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးပေးပါရန် အကူအညီ တောင်းခံခဲ့သည်။ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်း တရားခံရှိရာကို ချက်ချင်းလာခဲ့မည်ဟု အကြောင်းပြန်သည်။
နဂိုကတည်းက အံတကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေသော ရပ်ကွက်အခြေပြုအဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးသည် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးကျော်နှင့် ပူးပေါင်းကာ ရပ်ကွက်ဘတ်ဂျက်စုခံ၍ စုစုပေါင်း ကားခြောက်စီးဖြင့် ဆိုက်ကားသူခိုးဖမ်းဆီးရေး ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
ကြို့ကုန်းလမ်းဆုံနားအရောက် အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ သူခိုးက တစ်နေရာပြီး တစ်နေရာ ပြောင်း၍ချိန်းဆိုသည်။ နောက်ဆုံး ၎င်းမအား၍ မိတ်ဆွေတစ်ဦး အစားလွှတ်လိုက်မည်ဟုဆိုကာ ကြို့ကုန်းလမ်းဆုံရှိ လက်ဖက်ရည်တစ်ဆိုင်တွင် ငွေသုံးသိန်းပေးရန် သဘောတူခဲ့သည်။
‘‘ငွေလာယူတာ အမျိုးသမီးဗျ။ အင်းစိန်မှာ ကွမ်းယာရောင်းတယ်လို့ နောက်ပိုင်းသိရတယ်။ အမျိုးသမီးကို ကျွန်တော်တို့ကလည်း ပိုက်ဆံပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နောက်ကနေ လိုက်ချောင်းပြီး နောက်ယောင်ခံလိုက်တာပေါ့’’ ဟု ဦးခင်စိုးကဆိုသည်။
အမျိုးသမီးသည် ကြို့ကုန်းလမ်းဆုံမှနေ၍ အင်းစိန်ပန်းခြံသို့ ကားစီးသွားပြီး အင်းစိန်ပန်းခြံမှတ်တိုင်တွင်ဆင်းသည်။ ထို့နောက် BOT မှတ်တိုင်ဘက်သို့ လမ်းတစ်ဖြည်းဖြည်း လျှောက်သွားသည်။ ကားခြောက်စီးကလည်း မသိမသာ နောက်ယောင်ခံလိုက်ကြည့်သည်။ အမျိုးသမီး ဟိုသွားဒီသွား၊ ရပ်စောင့်၊ ဖုန်းပြောလုပ်နေသည်မှာ အတော်ပင်ကြာသည်။ နှစ်နာရီခန့် ကြာမြင့်လာသည့်အခါ နောက်ယောင်ခံသူများလည်း မစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ဆင်းဖမ်းခဲ့တော့သည်။
‘‘သူ့ကိုစစ်ဆေးတော့ သူကလည်း အကြောင်းစုံကို သေချာမသိပါဘူးပေါ့။ သူနဲ့က ကွမ်းယာဝယ်စားရင်း ရင်းနှီးတယ်လို့ပြောတယ်။ သူကလည်း ဖမ်းမယ်ဆို ကူညီပါ့မယ် ကတိခံတော့ သူ့ကို တည်ကြက်လုပ်လိုက်တာပဲ’’ ဟု ဖမ်းဆီးရေးတွင် ပါဝင်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
နောက်ဆုံးတွင်တော့ သကောင့်သား ဆိုက်ကားသူခိုးကို အနီးဆုံးခြေရာခံမိပြီဖြစ်ပြီး သူ့မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးကို ဆိုက်ကားသူခိုးက သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေးတွင် ချိန်းဆိုသည်။
ဒုတပ်ကြပ်တင်ထွန်းအောင်က အနီးမှ ကယ်ရီသမားကို အကူအညီတောင်းကာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားအဖြစ် အသွင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် တည်ကြက်အမျိုးသမီးနှင့် ကပ်လိုက်၍ ဆိုက်ကားသူခိုးနှင့် အနီးကပ်ဆုံးနေရာယူလိုက်တော့သည်။
‘‘ဟိုကောင်လည်း အနီးရောက်ရော အနောက်ကနေ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားပြီး ကျန်တဲ့လူတွေက ချက်ချင်းဆင်းလာဝိုင်း လုပ်လိုက်ကြတာပေါ့။ အခုပြောနေတာမှ ကြာသေးတယ်။ တကယ်ဖမ်းလိုက်တော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ခဏပဲ’’ ဟု ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ပြောသည်။ ဆိုက်ကားသူခိုးသည် သည်တစ်ခါတော့ ပထမကလို မရုန်းကန်နိုင်တော့ ယက်ကန်ကန်နှင့် ပါသွားလေတော့သည်။
ဆိုက်ကားသူခိုးကို မိသည်နှင့် ဘယ်လိုလွတ်သွားသလဲဆိုသည်ကို ဦးစွာဝိုင်းမေးကြသည်။
ထိုနေ့ညက မိုးကလည်း ခပ်ကောင်းကောင်း ရွာနေခဲ့သည်။ အိပ်နေသောသူခိုး၏ အပေါ်စားပွဲတွင် သော့တင်ထားသည်ကို သူခိုးရိပ်မိခဲ့၏။ မလှမ်းမကမ်းတွင် ထောင်ထားသော တံမြက်စည်းကို ခြေထောက်ဖြင့် လှမ်းယူလိုက်ပြီး တံမြက်စည်းကို ပါးစပ်ဖြင့် ယက်ကာ စားပွဲပေါ်မှသော့ကိုယူခဲ့သည်။ အချိန်အတန်ကြာ ကြိုးစားလိုက်ရသည်ဟု သူခိုးက ပြန်လည်ပြောပြ၏။ သော့ပွင့်သည်နှင့် ဖုန်းတစ်လုံး၊ ဝေါ်ကီတော်ကီနှင့် ဆိုင်ကယ်သော့ကိုပါ အသင့်တွေ့ရပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေရာလက်ရာမှန်းဖို့ ခက်ခဲစေရန် တံမြက်စည်းကို ခပ်ဝေးဝေးတွင် နေရာတကျ ပြန်၍ပင် ထောင်သွားသေးသည်။
‘‘တော်ရုံတန်ရုံခေတဲ့ကောင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တော်တော်လည်တဲ့ကောင်။ လျှော့တွက်လို့ မရတဲ့ကောင်။ အခုခရိုင်ရုံးမှာ စစ်တော့ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှုဟောင်းတွေပါ ပေါ်လာပြီ ကြားတယ်’’ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်စိုးကပြောသည်။
အင်းစိန် (က+ခ) ရပ်ကွက် အခြေပြုအဖွဲ့အတွက်တော့ အဆိုပါ ရှားလော့ဟုမ်းဇာတ်လမ်းသည် ပြောမဆုံးနိုင် ကျန်ရစ်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကားသူခိုးကို လက်ရ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းက ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေကြီး တပ်ကြပ်သစ်လွင်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ကူညီနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြသည်။
‘‘အကူအညီတောင်းတုန်းကတော့ ဘာမှမပေးခဲ့ဘဲ အခုကျမှ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ဖမ်းတာကပဲ သက်သက်မဲ့အမေကျော်ပြီး ဒွေးတော်လွမ်းသလို ဖြစ်နေသယောင် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ထင်နေရင်တော့ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ’’ ဟု ဦးခင်စိုးကပြောသည်။
လက်ရှိတွင်တော့ အင်းစိန်မြို့နယ်ကို ပတ်မွှေသွားသည့် ဆိုက်ကားသူခိုးသည် အင်းစိန်ခရိုင်ရုံးတွင် အချုပ်ခံထားရပြီဖြစ်သည်။ ထပ်မံထွက်ပြေးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်တော့ ‘‘လက်ထိတ်သုံးခု၊ သုံးခု ခတ်ထားတယ်ဗျာ’’ ဟု ရာအိမ်မှူး ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ရယ်မောရင်းပြောပါသည်။